कृषि विकासको वास्तविक समस्या के हो ? -
यस पटकको कोभिड-१९ कोरोना भाईरस गत बर्ष भन्दा अझ भयावह बन्दै गएको छ । अस्पतालहरुले अक्सिजन ग्यास नभएकाले थप विरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर सूचना टाँस गर्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा संक्रमित छन् तर पिसिआर जाँच गराएका छैनन् , किन भने अस्पतालमा ठाउँ छैन । कालिमाटी कृषि बजार जो देशकै ठूलो कृषि बजार मानिन्छ बन्द गरीएको छ । धादिङ्गका संकलन केन्द्रमा तरकारी थुप्रीराखेका छन् तर काठमाण्डौ पुर्याउन कसैले चासो देखाएका छैनन् । यति खेर धादिङ्गका कृषकहरुको घरघरमा तरकारी फल्ने र काठमाण्डौको बजारमा पुर्याउने समय हो तर यसो भएको पाइएन ।
यो समय योजना तर्जुमाको समय हो । आगामि बर्षका लागि कार्यक्रम बनाईदैछ । कार्यक्रम बनाउँदा कति कृषकसँग छलफल भयो ? कार्यक्रम कर्मचारीले जे बुझे तेहि भयो वा वास्तविक समस्या समाधान गर्ने गरी भयो ? अथवा मन्त्रालय , निर्देशनालय वा कार्यालयका केहि व्यक्तिले जे भने त्यहि भयो? यहि परिबेश भित्र समस्या रुमल्लिएको देखिन्छ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारीकरण कसरी भै राखेको छ र यसलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा कस्को हो ? यस तर्फ हामीले कहिले सोच्ने ?
प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आए पछिका तीनवटा आर्थिक बर्षको कृषि कार्यक्रममा केही कार्यक्रम बाहेक सधै नयाँ कार्यक्रम आउने गरेका छन् । के हरेक बर्ष नयाँ कार्यक्रममात्र ल्याएर समस्या समाधान हुन्छ? यस तर्फ अझै कसैको ध्यान पुगेको छैन । के हाम्रो जस्तो देशमा सधै बजार खुला छोडेर कृषिको विकास सम्भव छ? यस तर्फ सोचिएन भने हाम्रा कृषक पलायन हुने समय आइसकेको छ । त्यसैले हरेक स्थानिय तह र जिल्लाको समन्वयमा केही कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालन गरौं । यस्ता बजारसंग ब्लक, पकेट, मिसन, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई जोडौं र ति बजारमा बाह्रै महिना तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन संयुक्त र एकिकृत रुपमा योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ । वास्तवमा कृषि भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो, यसलाई एक्लो रुपमा हेरीयो भने देशको आवश्यक्ता अनुसारको उत्पादन हुदैन ।
नेपालको सम्बिधानमा खाद्य सम्प्रभुताको उल्लेख भए पनि यस सम्बन्धि ऐन नियम बनेको पाइदैन । सम्बिधानमा लेखिदिएर मात्र त्यसले काम गर्न सक्ला र ? खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयन कुन कानुन समातेर गर्ने? यसलाई नियमन कस्ले गर्ने ? यस्ता विषयमा गम्भिर भएर अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ? उत्पादन सामग्रीको अभाव प्राविधिक समस्या हो भने बजार ब्यवस्थापन मूल व्यवस्थापकिय समस्या हो । यस तर्फ कसरी अगाडि बढ्ने सबैले सोच्न जरुरी छ । आम कृषक द्वारा आम उत्पादन (mass production by mass people) र यसको व्यवस्थित बजारीकरणलाई ध्यान दिएर कृषि तथा पशुको कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।
गत बर्ष पनि यही समयमा मैले योजना तर्जुमामा पनि ध्यान दिने कि भनेर केही सवाल पश्किएको थिएं । उक्त लेखमा मैले दिगो उत्पादनका साथै दिगो वितरण प्रणाली, जमीनको विवरण संकलन, बेरोजगार युवाहरुको विवरण, तिनै तहका सरकारको समन्वय र कृषि बजार संरचना निर्माण तथा संचालनका कुरा अघि सारेको थिएं । यस बर्ष पनि विगतमा जस्तै गरी योजना तर्जुमा भयो, कर्मचारीहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनका बेला भोगेका समस्याका आधारमा कार्यक्रम तयार पार्नु भयो, मन्त्रालय र निर्देशनालयका सरहरुले आफ्ना अर्ति समावेश गर्न अनुरोध गर्नु भयो र कार्यक्रम निर्माण गरी पेश गरीएको छ । आाशा गरौं कार्यक्रम राम्रै हुने छ र विगतकै कुरा दोहोरीने छैन । यसो गरीरहँदा Credo of extension लाई ख्याल त गरेका छौं? के हो त Credo of extension ? Go to the people, sit with the people, start from where they are, plan with the people यी केहि बुँदा हुन जस्लाई नसम्झिकन गरीने कार्यक्रम दिगो हुदैनन् । अहिले को मूख्य समस्या नै यहि हो ।
अमरराज शर्मा घिमिरे
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
मेवाले दिने चमत्कारी फाइदाहरु, सुन्दै अचम्म लाग्ने
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि यन्त्र मर्मत तालिमको माग बढ्दो
माघ ९, २०७७ माघ ९, २०७७ किसान आवाज
धनियाँको अचार बनाउन यसो गर्नुस